अनसनमा रहेका डा. केसीको स्वास्थ्यमा समस्या !
इलाम । इलाम संसद सचिवालयका अनुसार डा.गोविन्द केसीसँग बिगतमा भएका सहमति बिपरित चिकित्सा शिक्षा बिद्येयक पारित गरेपछि १६ औं सत्याग्रहमा बसेका डा.केसीको स्वस्थ्यमा समस्य देखा परेको छ ।
शरीरमा पसिना आउने र छाती दुख्ने भएपछि इलाम अस्पतालका डाक्टरहरुको टोलीले चेक गरेको छन् । विपि कम भएको र लक्षण हेर्दा सुगरको कम भएको अनुमान गरे पनि डा. केसीले सुगर चेक गर्न दिएका छैनन् ।